33 jQuery Plugin ao amin'ny Gallery izay azonao ampidirina ankehitriny | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | jQuery, teknolojia
1 Popup mahafinaritra
3 Light Gallery
5 Swipe boaty
8 Galeria voamarina
14 Taratry ny jiro tsotra
18 Shuffle sary
21 Galerie voalanjalanja
25 Lightbox sary
31 Tariby jquery elastika
Plugin haingana, maivana ary mamaly ny jQuery izay miavaka amin'ny atiny ao amin'ny CSS, boaty maivana misy fepetra ary fanohanana ny High-DPI Retina.
Script script jQuery lightbox natao hampisehoana sary, horonan-tsary ary maro hafa. Izy io dia mamaly sy azo ovaina tanteraka. Mampiasa ny fanafainganana GPU ho an'ny fanaovana sary mihetsika tsara kokoa.
Plugin iray hafa mendrika ny atao mamaly, modular ary azo ovaina. Aza adino ny horonan-tsary HTML5, fizarana tambajotra ary sary thumbnail mihetsika.
Galerie vidéo sy sary mamaly, sariaka sy azo ovaina tanteraka. Izy io koa dia nohamarinina ho an'ny tranonkala sy ny finday miaraka amin'ny fiasan'ny fikosehana na ny vokadin'ny tetezamita.
Plugin "Lightbox" tonga lafatra ho an'ny birao, finday ary tablette. Izy io dia miavaka amin'ny fihetsika, ny tetezamita CSS ary ny fanohanana retina ankoatry ny fiasa hafa.
Galerie jQuery miaraka amin'i vokany mahatalanjona ary izy io dia mampiasa ilay antsointsika hoe tsotra sy manana fahaiza-manao lehibe.
Chocolat.js no mikarakara mampihetsika sary iray na maromaro ao amin'ilay tranonkala izany dia hijanona amin'ny pejy iray ihany.
Plugin iray hafa izay manana fahaizana mamorona a galerie misy kiran-draha "voamarina".
Un boaty maivana mamaly ary izany dia azo ampiasaina hamoronana sosona misampatra izay miasa tsara amin'ny habe rehetra.
jBox dia plugin jQuery iray hafa izay tompon'andraikitra amin'ny famoronana galeri-tsary maivana, extensible ary mamaly.
Plugin jQuery iray hafa izay Mitondrà sary mankany amin'ny takelaka miovaova ary izany dia mifototra amin'ny sary napetraka Tumblr.
Tompon'andraikitra amin'ny famoronana a ny sarin'ny sary "nohamarinina" ary afaka mameno ny habaka rehetra izy io.
Una sary notsorina miaraka amin'ireo fiasa rehetra tadiavinay toa ny mamaly, manohina, ny habaka ary koa ny fanohanana ny fitehirizana rahona.
Taratry ny jiro tsotra
Galerie Lightbox ho an'ny birao sy finday miaraka amin'ny jQuery miaraka amin'ireo fiasa rehetra tadiavinao: mamaly, fihetsika mikasika ary maro hafa.
Galerie mamaly amin'ny sarimiaina CSS ary fanohanana ny fihetsika na ny fikosehana na ny fikasihana.
Horonan-tsary jQuery sy sary fampiratiana sary jQuery izay azo lazaina ho toy ny iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy. Ilaina amin'ny karazana endri-javatra rehetra sy fanohanana toy ny horonan-tsary.
Plugin iray hikarakara asehoy ny sarin'ny sary kely izay mivelatra amin'ny topi-maso misy vokany mitovy amin'ny hita amin'ny sary Google.
Izy io dia naseho asehoy ny sary amin'ny alàlan'ny famindrana ny cursor manodidina azy ireo ary koa fomba hafa "mampihetsika" azy ireo.
Plugin maivana maivana tonga lafatra amin'ny famoronana galeriana misy maro fitoviana amin'ny an'ny Google na Flickr, iray amin'ireo tranokala fakana sary tsara indrindra.
Ity galeriana ity dia mikarakara zarao mitovy daholo ny sary izay anananao amin'ny tranonkala. Ny sary dia mifototra amin'ny ambaratonga fitoeran'ny default. Galerie tonga lafatra ho an'ny tranokala fanajana.
Ity plugin ity dia hikarakara tonga dia mamorona galeriana mifototra amin'ny lisitry ny kisarisary sary.
JQuery plugin boaty jiro lanja ambany ary miaraka amin'ny sary mamaly.
Un plugin carousel (eto ianao manana lisitra tsara amin'izy ireo) ary koa ny galerià ary slidwshow ho an'ny jQuery sy Zepto.
Galeria sary jQuery tena malalaka miaraka amina rakikira sy preloader.
Una sary kely indrindra miaraka amin'ny fanohanana mikasika izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha.
Galerie mamaly azonao atao amin'ny ezaka kely ianao.
Manomboha mamorona galeriana 3D miaraka amin'ny antso JS.
Tariby jquery elastika
Una galerie fahazavana ary mpampiasa-namana aingam-panahy avy amin'ny fikarohana sary Google. Ampiasao ny sarin'ny sary kely misy ny sary kely.
Galerie misy sary miaraka amin'i zQuery zoom. Iray amin'ireo farany indrindra amin'ny lisitra iray manontolo.
Un plugin jQuery tena tsotra ary afaka mamorona galerie rindrina miaraka amina sary mihetsika izay mifanakalo fifandimbiasana singa. Mora ampiasaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » Plugins Jquery 33 ho an'ny galeriana azonao ampiharina amin'ny tranokalanao izao
Salama: mitady hanao boaty jiro misy ny VIDEO TSY MISY SARY, izay tsy avy amin'ny YouTube aho, fa notehiriziko tao amin'ny solo-sainako ireo. Mikasa ny hanao sary kely miaraka amina hetsika aho ary rehefa tsindrio ilay horonantsary dia misokatra amin'ny boaty jiro na baravarankely pop-up izy io ary tsy haiko ny fomba. MISAOTRA
Nisongadina tamin'ny afisoratra nosoratan'izy ireo ny afisin'i Han Solo